यी तीन मन्त्रीको पद आजबाट चैट, कसले पाउदैछन् नयाँ चान्स ? — Sanchar Kendra
यी तीन मन्त्रीको पद आजबाट चैट, कसले पाउदैछन् नयाँ चान्स ?
तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेमा रहेका उनीहरुले फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले उनीहरुलाई कारबाही गरी सांसद पदमुक्त गरेको थियो। वैशाख २ गते फ्लोर क्रस गरेका उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ४ गते मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
सोही अनुसार उनीहरु आजदेखि स्वतः मन्त्रीबाट पदमुक्त हुन्छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेका तीनजना मुक्त भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले सोही मन्त्रालयमा दावी गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा समाजवादीका तीन मात्र सांसद छन्।
रुकुम पश्चिमकी देवी ओली, मुगुका चन्द्र बहादुर शाही र जुम्लाका पदमबहादुर रोकाया समाजवादीका सांसद् हुन्। यदि समाजवादीको दावी कार्यान्वयन भएमा उनीहरु नै मन्त्री हुनेछन्। आजदेखि खाली हुने कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले दावी गरेको छ।
आजदेखि पदमुक्त हुन लागेका अम्मरबहादुर थापा समाजवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष छन्। उनले पनि आजदेखि खाली हुन लागेका मन्त्रालयहरु समाजवादीले नै पाउनुपर्ने बताए। ‘पहिला पनि सहमति भइसकेको छ, यी मन्त्रालयमा हाम्रो सांसदहरु हुनुहुन्छ,’ थापाले भने।